Ikhaya eliswiti lasekhaya ❤️ (Igumbi lokuhlambela labucala)
Igumbi lakho lokulala e i-townhouse sinombuki zindwendwe onguAnna
Indlu epholileyo ejikelezwe buhlaza. Ifanelekile ukuchitha iintsuku ezimbalwa ujikelezwe yindalo, izilwanyana kunye nokutya okulungileyo okanye ukuvuselela emva kohambo olude. Kukho amagumbi amabini akhoyo, aneebhedi ezimbini.
Iindawo eziqhelekileyo kufuneka kwabelwane ngazo kunye nomama ukuba ukho ekhaya, ekulungele ukukwamkela ngobubele bakhe bonke kodwa uhlala eyimfihlo kunye nokuzimela ngokupheleleyo. Indawo eqhelekileyo kunye negciniweyo ngaxeshanye!
Indlu ikwimigangatho emibini: ikhitshi kunye negumbi lokuhlala elivulekileyo kumgangatho osezantsi ekunokwabelwana ngawo nosapho kunye nabahlobo ukuba bakhona endlwini. Phezulu kukho amagumbi anegumbi lokuhlambela eligcinelwe iindwendwe.
Indlu iyamkeleka kakhulu, igcwele izinto kunye neenkcukacha ezenza ukuba ibe yodwa. Amagumbi makhulu kwaye akhanya kakhulu. Kukho iincwadi ezifumanekayo ukuze iindwendwe zifunde ngexesha lokuhlala kwazo.
Ikiti eyongezelelweyo yokucoca iyafumaneka kwiindwendwe. Izicoci, iijeli, izinto zosula, izitshizi zokubulala iintsholongwane, isicoci sesandla, iiglavu, zonke izixhobo zonyango kunye nezotyando.
Indawo yokupaka ibandakanyiwe kunye negaraji yezithuthuthu.
Indawo egqibeleleyo yokuhamba okanye ukukhwela ibhayisekile, ukonwabela ubomi obusempilweni obungqongwe buhlaza kunye nokuzola. Kummandla okufutshane kukho ifama "Il gallo larino" eyamkela kuphela iintlobo zezilwanyana ezisengozini. Ngaphezu koko, le ndlu ibekwe kwindawo yobuchule phakathi kolwandle, iintaba kunye namachibi anokufikelelwa ngaphantsi kweyure. Ngelixa imizuzu eli-15 ngemoto, ungandwendwela uninzi lweelali ezidumileyo eItali njengeBoville Ernica kunye neCastro dei Volsci. Isola del Liri, Casamari, Arpino, Roccasecca kunye nezinye ezininzi ... Kukho nje ukufunyanwa
Ngalo lonke ixesha lokuhlala kwakho unganxibelelana nomama ukuba ukhona ekhaya okanye whatzap, e-mail, umnxeba 3477165397, nokuba kwenzeka ntoni.